पार्टी बैठक जति छिटो गर्नुहुन्छ जतिधेरै बैठक गर्नुहुन्छ समस्याहरु समाधान हुन्छ। बैठकबाट भागेर पार्टी समस्या समाधान हुदैँन। स्थायी समिति बैठक हुनुपर्छ। पार्टी बैठक जति छिटो गर्नुहुन्छ जतिधेरै बैठक गर्नुहुन्छ समस्याहरु समाधान हुन्छ। बैठकबाट भागेर पार्टी समस्या सम… – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/पार्टी बैठक जति छिटो गर्नुहुन्छ जतिधेरै बैठक गर्नुहुन्छ समस्याहरु समाधान हुन्छ। बैठकबाट भागेर पार्टी समस्या समाधान हुदैँन। स्थायी समिति बैठक हुनुपर्छ। पार्टी बैठक जति छिटो गर्नुहुन्छ जतिधेरै बैठक गर्नुहुन्छ समस्याहरु समाधान हुन्छ। बैठकबाट भागेर पार्टी समस्या सम…
पार्टी बैठक जति छिटो गर्नुहुन्छ जतिधेरै बैठक गर्नुहुन्छ समस्याहरु समाधान हुन्छ। बैठकबाट भागेर पार्टी समस्या समाधान हुदैँन। स्थायी समिति बैठक हुनुपर्छ। पार्टी बैठक जति छिटो गर्नुहुन्छ जतिधेरै बैठक गर्नुहुन्छ समस्याहरु समाधान हुन्छ। बैठकबाट भागेर पार्टी समस्या सम…
सत्तारूढ नेकपाका स्थायी समिति सदस्यहरुले लिखित रुपमै बैठक माग गरेपनि नेकपाको स्थायी समिति बैठक बसेको छैन।
नेकपा भित्र अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल एकातर्फ भएपछि पार्टी भित्र अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा छन्। नेकपा भित्र अहिले युद्धविरामको अवस्था छ। तर अझैपनि स्थायी समिति बैठकको माग सेलाएको छैन।
सेतोपाटीले नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालसँग नेकपाको अहिलेको अवस्थाबारे कुराकानी गरेको छ –
चीनले कोरोना फैलाएको प्र’माणित भए ध्व’स्त पार्ने ट्रम्पको चे’तावनी
खुशिको खबर्: कोरोना भाइरसको एन्टिबडी किट तयार
भोकभोकै हिंडेका पैदलयात्रीलाई बोलाउँदै खाना खुवाउँदै सर्लाहीका मनकारी दम्पती ! सम्मानको लागि सेयर गरौ
भारत-चीनका सेनाबीच लद्दाखमा भि-डन्त, ३ भारतीय सैनिकको मृत्यु!
धनगढीमा डेरा गरी बस्ने श्रीमती प्रहरी जवानले भगाएपछि २ छोरीको विचल्ली